The Best Museums MuEurope Vari Kupi | Save A Train
musha > Travel Europe > The Best Museums MuEurope Vari Kupi
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Sweden, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 27/11/2020)
Kana uri kushamisika apo kuwana zvakanakisisa mamiziyamu mu Europe, isu iwe akafukidzwa! Kana iri unyanzvi, nyika, kana zvakasikwa nhoroondo, ari mamiziyamu kubva zvatataura haazorambi kukundikana katyamadza iwe.
Chii chimwe, unogona kusvika zvose izvi dzokugara nechitima kana uri kutsvaga inokwanisika nzira yokufamba. Ngativei vanyatsoona yakanakisisa mamiziyamu muEurope uye kuti papi:
Louvre Museum, Paris, Furanzi
The Louvre angava rimwe yakakurumbira mamiziyamu muEurope uye nyika. Ndicho chikuru, kuvhara nzvimbo ye 72,735 mamita akaenzana. Ichi miziyamu naka musha kupfuura 35,000 zvinhu uye mumwe varipo muParis. Unofanira kushanyira kana iwe kuenda Paris nechitima!
Venaria Reale, Turin, Itari
Zita mumuzinda iri rinobva muchiLatin The kuvhima roumambo, rinoreva "kuvhima youmambo". Muzana ramakore rechi 17 nerechi 18, raiva muzinda yokuvhimwa nzendo ose Duke Charles Emmanuel II. Zvino muzinda enchants vashanyi ano wayo Baroque chatiri runako. Haugoni kuchipotsa kana ukaona muna nokuTurin.
The Museum nokuda Stream, Antwerp, Bherujiyamu
The Museum kurwizi kana Mas ndiko kuri miziyamu muna Antwerp. Kana uri kutsvaga Panoramic maonero, pane akasununguka kuwana padenga of miziyamu. The kunzwisisa kuti Mas anewo resitorendi uye Datenroku pazasi paro. The miziyamu pachayo akanaka uye inokosha kushanya kana uri Antwerp.
zvebhaibheri, Amsterdam, Netherlands
Chimwe miziyamu ari Netharenzi, ari zvebhaibheri miziyamu riri mu Amsterdam. Zviri imwe yakanakisisa mamiziyamu muEurope kana uchida kudzidza zvakawanda nezveBhaibheri. Yekushanyirana Bijbels anobatsira kunzwisisa kukosha uye kwechirwere Bhaibheri Dutch vanhu. It urwu, akasiyana miziyamu, zvakanaka-wakanyatsokodzera vaya vanoda vechitendero nhoroondo.
Kunsthistorisches Museum, Vienna, Ositiriya
Kunsthistorisches Museum ndiye anonyanya kuzivikanwa uri miziyamu mu Ositiriya, anonziwo Museum of Arts Fine. Vamwe ayo anoratidza yakakurumbira zvinosanganisira mabasa Rembrandt, Michelangelo, Raphael, uye Rubens. Zvave zvichishamisa kune vadikani vehunyanzvi vane runako rwekugadzira kubvira kuvhurwa kwayo mukati 1891. munhu kushanyira Vienna nechitima Inofanirwa kuita gadziriro dzekuona iyo Kunsthistorisches Museum.
MACHmit Children Museum, Berlin, Jerimani
Nokuti vafambi nevana, haina kuwana nani kupfuura MACHmit Children miziyamu Jerimani. Kana ukaona muBerlin, nechokwadi kuti tarisa MACHmit yaro siyana pamusoro zvinokwezva. Vane akakodzera vakuru uyewo, yakawanda neanofadza akadai unyanzvi rabhoritari, anodhinda workshop, uye pakukwira makomo labyrinth.
Skansen Open-Air Museum, Stockholm, Siwidheni
Skansen panze miziyamu aiva wokutanga rwayo muSweden. It yakavhurwa 1891 uye yawedzera kuva yakakurumbira kupfuura miziyamu mu Stockholm. A Vakamupfekedza maonero kubva Royal Djurgarden ndiyo bhonasi taishanyira Skansen. Uye vaya vanoda kuona dzekuma Scandinavia-chizvarwa mhuka, kune zoo izvo zvinovaratidza.
The yakanakisisa mamiziyamu mu Europe dziri kumirira iwe. Kana wagadzirira kuenda, bhuku rako chitima matikiti zvino kunakidzwa chokufambisa!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-museums-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#mamiziyamu #traveleurope europetravel eurotrip miziyamu famba travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands traveltips
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe